के भयो यस्तो बिराट कोहलीलाई? - Everest Dainik - News from Nepal
के भयो यस्तो बिराट कोहलीलाई?
काठमाडौं । भारतीय क्रिकेट टीमका कप्तान बिराट कोहलीको एउटा तस्वीर अहिले निकै भाइरल भएको छ ।
तस्वीरमा बिराट कोहली कमिज र पाइन्ट खोलेर बसेको देखिन्छ ।
यो तस्वीर सार्वजनिक गर्ने क्रममा कोहलीले भने दार्शनिक अन्दाजमा लेखेका छन– जब हामी आफ्नै अन्तस्करणमा चियाउन थाल्छौं, हामीलाई बाहिर केही खोज्ने आवश्यकता रहँदैन ।
तर उनको यो तस्वीर सार्वजनिक भएपछि यसलाई लिएर मजाक गर्ने क्रम बढेको छ ।
इन्स्टाग्राममा तस्वीर सार्वजनिक भएपछि कतिपयले उनको ट्राफिक चलान काटिएको भन्दै मजाक गरेका छन् । कतिपयले भने थाकेर सुस्ताएको भनेका छन् ।
उनको यो तस्वीरलाई इन्स्टाग्राममा २१ लाख बढीले मन पराएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस धोनी र गांगुलीलाई पछि पार्दै बिराट बने सबैभन्दा सफल कप्तान
कमेन्टमा एकजना युजरले लेखेका छन– सर, नम्बर १ बाट हटेपछि अनुष्काले पनि घरबाट निकालिदिएको हो र ?
ट्याग्स: बिराट कोहली